Firefox inokunda iyo Bhurawuza Hondo | Martech Zone
Chishanu, December 8, 2006 Muvhuro, Zvita 17, 2018 Douglas Karr
Kutarisa pamusika wapfuura wemabrowser kunopa imwe nzwisiso yekuti ndiani ari kuhwina nekurasikirwa nehondo. Firefox inoenderera mberi nekukura, Safari iri kukambaira kumusoro, uye Internet Explorer iri kurasikirwa pasi. Ndinoda kutaura nezvevatatu ne 'dzidziso' dzangu dzezvinoitika.
Mushure mekuparadza Netscape Navigator, IE yakanyatso kuve muyero wegoridhe remambure. Bhurawuza racho raive nyore, richishanda, uye risati ratakurwa nezvose Microsoft Zvigadzirwa. Zvakare, ActiveX yakanga iine pfupi pfupi, ichida vanhu vazhinji kushandisa IE. Nei uchishandisa mabhurawuza akawanda kana imwe yadzo ichitsigira ese akasiyana matanho pawebhu? Ini pachangu ndaive IE mushandisi kuburikidza neshanduro 6.
Iine Internet Explorer 7, iyo webhu dhizaini yepasi yakanga ichinyatso bata mweya wayo kune browser iyo yavanogona kugadzira iyo yaizoita zvinoenderana neazvino matekinoroji eCascading Style Sheets. Nehurombo, IE 7 yaodzwa mwoyo. Mukudzokorora IE IE Blog, yakanga isiri kunyange pane radar kusvikira browser iri beta uye kuchema kwekutambudzika kwakabva kune webhupu yekugadzira indasitiri. Kumwe kwekuvandudza kweminiti yekupedzisira kwakaruramisa dzimwe dzenyaya… asi dzisina kukwana kuti dhizaini nyika ifare. Rangarira - vazhinji vari mukugadzira nyika vari kushanda paMacs… vachishaya Internet Explorer. Asi, zvinosuruvarisa kwavari, vatengi vavo vanoshandisa Internet Explorer.
Asi maiwe, neInternet Explorer 7, Microsoft yakachinja zvakanyanya kudyidzana pakati pemushandisi nemutengi. Zve technophile seni, zvimwe zvekuchinja zvaive zvakaita kutonhorera. Asi kumushandisi atypical… kusakwanisa kungoenda pamusoro pechidzitiro zvainetsa uye kuvhiringidza. Vakatanga kutarisa kuti chii chimwe chaive kunze uko. Firefox.
Screenshot kubva http://marketshare.hitslink.com/
Kufananidza general browser mashandiro ayo anodzokera kuNavigator, Firefox yakava isingaremi imwe mhinduro kuInternet Explorer. Kune vanopandukira Microsoft anarchists, Firefox yakava chishuwo uye yakatanga kukwereta musika.
Kuwedzera mashandiro semapulagi akaisvonaka ekubatanidzwa nemamwe matekinoroji anga ari mafaro anoshamisa kuFirefox. Ivo vanoramba vachikwezva vanogadzira uye webhu dhizaini zvakafanana ... sezvo Firefox ine robust debugging, Cascading Style Sheet, uye yechitatu bato plug-ins izvo zvinoita kuti budiriro uye kusanganisa toni ive nyore.
Iwo musika uri kuchinja futi. ActiveX yakangofa asi Ajax iri kukwira, ichikweretesa kune mabhurawuza akaita seFirefox. Hapana hunyanzvi hapana chikonzero chekushandisa Internet Explorer mazuva ese aya. Kana IE ichigona kuzviita, Firefox inogona kuzviita zvirinani. Windows Dzidzo dzinoshandiswa kuda kubhurawuza, asi ikozvino dzinogona kutakurwa nekuiswa pasina iyo.
Firefox haina kusiya iko kushandiswa uye marongero senge Microsoft yakaita neIE 7, zvichiita kuti zvive nyore kune vashandisi kuchinjira kuFirefox kubva kuIE 6 zvakapusa uye nyore. Yakanaka, inokurumidza, uye isina musono.
Nekuchimbidza kwaMac mumusika wePC wepamba… haisisiri PC yeMayunivhesiti, Vakadzi neVana zvekare. Yangu Mac nyowani inomhanya OSX, Windows XP (ine Kufanana) uye ini ndinogona kumhanyisa bhurawuza rega repasi kugadzira nekukudziridza ku. Ine Safari yakatakurwa kare, hapana mubvunzo kuti iri kuwana mugove sezvo maMac ari kuwana mugove. Kufanotaura kwangu ndekwekuti Safari icharasikirwa neFirefox, hazvo.
Microsoft inofanirwa kunzwa ichityisidzirwa - asi imhosva chaiyo yavo. Vakabvisa chero kudiwa kwevo bhurawuza ravo, vashandisi vakaparadzaniswa, vagadziri vekugadzira, vashambadziri vanogadzira, Uye ivo vava kubvumira vamwe kuti vavatorere kune mamwe ma verticals (nhare).
Internet Explorer ingori yekuzviparadza. Handina chokwadi chekuti tarisiro yevatengi iri kupi zvachose.
Mushure mekurodha pasi nekuisa Firefox, enda kune iyo Wedzera-ons chikamu uye kurodha kune zvemukati zvemwoyo wako. Kune chero munhu anoita izvi, ndinokuda iwe kuti ushandise bhurawuza kwevhiki mbiri wobva wadzokera kune yangu saiti uye undizivise zvaunofunga.
Ndanga ndiri mukomana weMicrosoft kweanopfuura makore gumi ikozvino, saka ini handisi basher. Nekudaro, ini ndakanzwa ndichimanikidzwa kupindira ndigokurukura nezvehunyanzvi hwekukanganisa iyo IE timu yakanyatso pinda mazviri.
Tags: bhurawuza hondobrowsersFirefoxieinternet kuongorora 7Microsoftnetscape navigator
Inokurumidza Kukura Blog paPuraneti?
Zvita 8, 2006 na11: 36 PM
Ini ndinobvuma kuti hapana chikonzero chekushandisa IE futi, asi zvinosuwisa kuti nyika ichiri izere nevatengesi veinternet vasingazive zvirinani. Ndinovimba izwi remuromo richachinja izvo pakupedzisira.
Ndave ndiri mushandisi anofara weFirefox kwemakore akati wandei ikozvino. Ndiri kunzwa kuda nezvayo nekuda kwekuwedzera kuwanda, uye nekuwedzera kuchengetedzeka pamusoro peInternet Explorer.
Pandakawana yangu MacBook Pro nyowani pakutanga kwegore rino, ndakaedza Safari kwemavhiki mashoma, asi ndakazopedzisira ndadzokera kuFirefox. Zvisarudzo zvekugadzirisa zvinenge zvisingagumi. Mugore rapfuura, ndakabudirira kushandura mhuri yangu yese (uye neshamwari dzangu zhinji) kuFirefox.
Paul aisada kundinyadzisa - asi iwe unozoona ini ndakagadzirisa maphobias angu kune philes! Kubata kwakanaka kubva kuna Paul uyo aive akanaka zvakakwana kuti anditumire email! Vaya vanhu vanondiziva vanoziva ndiri nyanzvi yekurovera Chirungu. Ichokwadi ishamwari inokununura kubva mukuzvinyadzisa iwe!
Paul ane blog yakanaka pamusoro pa:
Ini ndinobvumirana zvachose kuti Firefox iri kuzorova IE 7 kana zvichienda mberi….
Chikonzero chekurova ndechekuti Firefox plugins uye Firefox Wedzera-zvimiti.
Ini ndinofunga muna Chikunguru 2007, IE inomira pa 35%
Assalamu, Fazal. Ndinobvumirana newe! Iine Firefox 3 Alfa yatove kunze, Mozilla iri kupisa nzira iyo Microsoft isingakwanise kukwikwidza nayo.
Kukadzi 3, 2007 na6: 46 PM
Ini ndakaisa IE7 pakombuta yedesktop yangu uye yakashanda mushe mushure mekunge ndasangana nayo zvimwe asi pandakazviisa palaptop yangu, zvakamisa zvese kumira. Dai ndanga ndisina kuona kuti chirongwa ichi (pasina chero mawedzero) chaive chakabatanidzwa nezvangu zvirongwa pasi pezvishongedzo ini ndaisazokwanisa kusvika zvachose.
Ndiri kunetsekana, ndinoita kubhengi pamhepo uye handina chokwadi chekuti ndinogona kushandisa Foxfire. Ndingafarire kuyedza asi ini ndoda rumwe ruzivo.
Kukadzi 3, 2007 na7: 39 PM
Yemazuva ano epamhepo kubhengi ndeye muchinjiko-browser inoenderana. Kunetsekana kwacho kungave kwekutsigira SSL (Yakachengeteka Socket Layer), ndiyo nzira yakavharidzirwa yekutaurisa dhata pakati pebrowser yako uye maseva ebhengi epamhepo. Firefox inonyatso tsigira SSL sezvinoitwa neIE isina muganho. Nzira iri pachena yekuziva kuti urikushandisa SSL ndeyekuti uri pa https: // kero pane http://. Nekudaro, zvese zviri zviviri IE uye Firefox (uye Opera neSafari) zvakare zvine zviratidzo zvekuona uye maitiro ekusimbisa ayo SSL setifiketi uye kunyorera zviri kushanda uye kushanda nemazvo.
Mune mamwe mazwi - haufanire kunge uine chero nyaya. Ehe hazvimborwadzi kutarisa peji rako re "Support" rebhangi kuti uone kana vachitsigira Firefox. Iwe uchanyatso tsvaga iyo yakanaka bhurawuza - nekukurumidza zvakanyanya nezvakawanda zvakawanda zvekuwedzera.
Thanks nekushanya… uye nekupindura!
Mbudzi 3, 2007 na5: 50 PM
Firefox yakayambuka mazana mana emamirioni ekurodha uye, netariro, ichaenda kumberi. Dzimwe nzira dzinogara iri nzira yekufambira mberi.
Asi iyo inokunda iyo bhurawuza hondo… ichiri kusvika pakutanga izvo.
Mbudzi 3, 2007 na11: 24 PM
Ini ndashandisa IE kwemakore, ramba ndichiishandisa uye kutaura chokwadi handifadzwi nemushandisi-nhanho yemushandisi yeFirefox. Ini ndinofungidzira kuti ruzhinji rwevashandisi vanogona kutarisira zvishoma. Ini ndinobvumirana newe, zvisinei, kuti shanduko kuIE 7 dzaive dzichinetsa.
Mbudzi 21, 2007 na8: 11 PM
Ini ndinobvumirana neyako thoughs paIE7 uye kuve webhu dhizaini, ini ndakadzikiswa nezvinhu zvishoma pakaburitswa IE7. Ndiri parizvino ndiri munzira yekuvaka webhusaiti nyowani uye ndasangana nedzimwe nyaya nema divs asi hapana chikuru (kusvika ikozvino). Ini ndangoshandisa IE7 zvishoma asi ini ndanga ndichitarisira kusvetuka kukuru kubva pa6.0 tichinongedzera kuCSS rutsigiro, nezvimwe.
Ndave ndiri mushandisi weFirefox kwemakore uye ndatora vashoma vashoma vashandisi munzira. Ini ndinofunga chinhu chinonyanya kundikwezva, uye vamwe vazhinji vevashandisi veFF, inyaya yekuti iri rakanyanya webhu dhizaini / musimudziri ane hushamwari uye maitiro acho anotyaira. Ini ndinofunga IE ichaenderera ichidzika uye ndinofunga Microsoft ichada chishamiso panguva ino. Simba iro Firefox yakawana uye Safari iri kuwedzera zvishoma nezvishoma, iri kukunda IE uye nenyaya yekuti vanoramba vachipera pakuburitsa webhu inoenderana nebrowser, haisi kuvabatsira pazvishoma.
Isu vewebhu vagadziri vanogona kungovapa mikana yakawanda kudaro 😛
Nov 22, 2007 pa7: 44AM
Aya mazwi pane kutsausa. Zvinoenderana nezviverengero zvichangoburwa zvandakaona mugove weIE “wadonha” kubva pa85.88% mugove wepasirese weQ4 2005 kusvika 78.5% paQ3 2007. Ndiro donhwe re7.3% mumakore angangoita maviri.
Zvichakadaro, Firefox yakaswededzwa kubva pa9% kusvika 14.6% panguva imwecheteyo nguva. Iko kuwedzera kwe5.6% mumakore angangoita maviri.
Safari yaenda kubva pa3.1% kusvika pa4.77% - iko kuwedzera kusingatombofaniri kutaura nezvako.
Hongu Firefox iri kuwana pane IE, asi IE ichiri pachena ine vanopfuura vashanu vashandisi.
Aya ma stats anobva kuWikipedia "Usage_share_of_web_browsers" uyezve zvinogona kurerekera neimwe nzira.
Sezviri pachena vazhinji vepasirese havana basa nezvinofungwa nevagadziri vewebhu. Ini ndaizofunga kuti tinofanirwa kugadzirira ruzhinji pane kushushikana nezvedu zvatinofarira.
Nov 22, 2007 pa8: 48AM
Thanks Rick! Tinogona here kubvunza kuti wako masosi ari nezve stats?
Ini ndinobvumirana newe, asi pane yambiro yekusava nehanya nezvinofungwa nevagadziri vewebhu… uye ndiyo webhu dhizaini icharamba ichidhura kuita kana uchifanirwa kugadzira kunze kwematanho kufadza iwo 85.88% yemugove wemusika!
Mbudzi 22, 2007 na2: 25 PM
Icho chinogara chiri chekutanga kugadzirirwa ruzhinji asi chokwadi chekuti Microsoft haisi kutevedzera munhu wese, chinoita kuti mabasa edu anyanye kuoma. Ini ndinozviwana dzimwe nguva ndichifanira kunyora akaparadzaniswa zvachose machira echitaera chete eIE ndega uye zvinotora nguva. Izvo hazvireve chero chinhu kune wepakati mushandisi. Zviri kungoodza moyo kana bhurawuza iyo inotungamira iyo pack ndiyo iyo iri shoma webhu zviyero zvinoenderana.
Mbudzi 22, 2007 na3: 44 PM
Ini handina nharo nezvako zvinonetsa kubva kune wekugadzira maonero, kunyangwe ini ndisina chokwadi chekuti nei uchizonetsekana kuti iwe unogona kubhadharisa vanhu zvakanyanya kune ako masevhisi. Ndezvekuti vanhu havana kugadzirira kuribhadhara here? Zviripachena idzi inyaya dzehunyanzvi dzinofanirwa kukundwa.
Ini ndinongotora nyaya nezano rekuti pane mafambiro makuru kure neIE. Iwo maverengero (sekugona kwandinogona kutaura) haatsigire izvo zvirevo, kunyangwe vese vagadziri uye maOOs anoti zvimwe uye avo vanokurudzira nekusingaperi FF. Kunyangwe ivo vachifanira kunge vachikurudzira iwo mumwe mubvunzo, uye iwe unogona kunge uri wakanyatsojeka nezve izvo.
Sezvandambotaura mukutaura kwangu, kwayakabva yaive Wikipedia - kwete sosi inonakidza kwazvo, asi huwandu hwacho hunoratidzika kunge hwakakwana…
Mbudzi 23, 2007 na5: 42 PM
Iwe unogona kunge wakarurama pane zvese nyaya, Rick. Ini ndaizopokana kuti IE inoramba iine mugove mukuru wemusika nekuti chikamu cheiyo Inoshanda Sisitimu, hazvo. Dai zvaive kurodha pasi kurodha pasi uye nesarudzo yakasarudzika, ndinonyatso tenda kuti FF ingadai ichikava matako avo.
Ini ndaimbove programmer uye webhu mugadziri. Muna 2003 ndakaita tsaona ndikarova musoro. Kunyora kodhi ikozvino kwakanyanya kwandiri, saka ikozvino ini ndangovawo wakajairwa joe..lol
Chero zvodii, ndanga ndichishandisa Linux kubvira sa1996 (rangarira Caldera-pawaifanira kurega ichizvitsvaga yega kwemazuva maviri..lol). Webhu mabhurawuza anga asina kumbobvira akanakira iyo pamberi peFirefox. Pakabuda Firefox, chaive chinhu chikuru kuvashandisi veLinux (Thunderbird futi). Sezvo Microcrap yakagara ichikwenya vashandisi veLinux, vakazvipfura netsoka. Ndinoyeuka Firefox / Thunderbird ichiva yepamusoro internet suite yeLinux nyore. Haisi yakawanda, uye iwe unogona kuisa chero zviwedzero zvaunoda (adblockl!). Nekudaro, iyo yakareruka kana inorema sezvaunoigadzira iwe. Hapana zvikamu zvisingadiwe zvachose. Iwo matabo anotonhorera uye madiki.
Ndiri kushandisa Windows xp, nekuti izvo 'vamwe' pano zvinosuwisa zvakaita mamiriro ekutenga iyi pc, saka 'ivo' vanogona kuishandisa (mapenzi). Ndokusaka ini pakarepo ndakaburitsa firefox / thunderbird. Pandakashandisa Windows zvakare, Ndakavenga Outlook kuratidza, uye ndichiri kuda Firefox kudzoka, nezvangu zvekuwedzera (ini ndakato chengetedza ese mafaera. Mafaera nemabhukumaki angu kubva kuLinux, ndikaapinza muWinxp!).
Munguva pfupi yapfuura, pc yangu yakatanga patsva husiku, uye ini ndaive neA ALIEN akatarisa mafuta ekushandisa ane HUGE tabo asingazoendi. Iwo friggin chishandiso mabara anotora 1/5 yeyakakanganiswa skrini! NDAKANDIVENGA! Vese vamwe pano vakavenga zvakare. Iri kupi STOP bhatani? Hapana munhu anoda kuti bhurawuza itore nzvimbo yakawandisa! Maseru makuru, kunyangwe paine chete 1 peji !!
Ko zvakadii newebhu peji? Iwe haugone kana kuzviona nekuti zvese zvaunoona ndizvo BHURUSHA! Izvo zvinovhiringidza, zvekuti ini handina kukwanisa kumira nazvo. Microsoft zviri nyore haina nzvimbo yekunyunyuta kana. Wakaita sei murwi wejarbled junk. Screen resolution yangu yakaiswa pa1152 × 864 uye handigone kufungidzira kuti ingatarise sei pa800 × 6000! Ini ndaizogonawo kuona peji racho here?
Saka zvigunwe zviviri pasi zveIE2! Wese munhu anozvivenga, uye iko kufa kweIE. Zvinosetsa, ivo vaive neak browser, asi nekuteedzera Firefox, ivo vava nejunk. Ndiri kureva .. ndezvipi zvese izvo zvipenga pamatombo ekushandisa, uye mamwe mabhatani aripi ??
Saka, ndatenda Microsoft, iwe wazviitira iwe pakupedzisira! Ini zvino ndoshandisa yakawanda nguva kutsanangura kune vamwe vanofona uye vanobvunza kuti nei bhurawuza ravo rangoerekana rave rinotyisa uye rakaomarara, uye kuvabatsira kuburitsa IE7! Hapana anochida!
Ini ndinofunga kurudyi kwako VaBlog murume, ini ndanga ndichishandisa Firefox pakombuta yangu kweinopfuura gore izvozvi uye handina kuzocheuka kubva ipapo. Chero ani anoziva chero chinhu nezve computer software anogona kukuudza kuti Firefox ndiyo yepamusoro browser maoko pasi. Handisati ndamboedza iyo Thunderbird software nekuti iyo Outlook 2007 muHofisi Enterprise yakanaka kwazvo uye inoshanda kwandiri. Nei uchichinja kana chisina kutyorwa. IE 6-7 yakaputsika hazvo, chero nguva ini pandinoshanda kushamwari, mhuri, shamwari yepamhepo, kana kungoti munhu anoda rubatsiro ndinogara ndichiisa kana kuvaudza kuti vatore Firefox. Iyo haina brainer mubhuku rangu.
Ini ndinongoda kuziva kuti nei Microsoft yaifunga kuti vari kuburitsa yepamusoro browser, ivo havana ruzivo zvachose kune nyika yakavapoteredza? Imhaka yekuti vanofunga kuti yavo software inoshamisa kwazvo zvekuti vanhu vanozoishandisa zvakadaro? Kana kuti imo nekuti Microsoft yaive ichitsvaga mumabhiriyoni pazuva uye ivo vakati "kanganwa mutengi isu hatine hanya nezvavanofunga" saka ivo vangoda kumanikidza bhurawuza risingakoshe uye risingateerere pamusika. Idiots! Yayo haina kuita sekuti ndine junky komputa, IE inomhanya kunge crap pane chero system. Iyo inofanirwa kunge iri mune software kodhi kana chimwe chinhu.
Zvekungonakidzwa ndakazvitakura nhasi kungoona kana zvainge zvagadziriswa neimwe chishamiso (hapana) zvichiri kuyamwa. Ipapo ndikati nechemumoyo “Sei, nei ichimhanya kudaro” saka ndakatsvaga (Nei Internet Explorer ichitakura zvishoma nezvishoma) uyezve ndakashandisa Google peji reji kutsvaga paFirefox. Ini ndakaguma pano mushure mekutevera chinongedzo kubva kune imwe saiti ine chinyorwa chakadai pairi pairi. Ndakawana divi rakateedzerwa saka ini nanhasi handina mhinduro yangu. Enda Firefox Enda! Kick Bill Gates mumanzungu edu tese kamwechete nguva munhu mumwe nemumwe achienderera. Ini ndicha cherekedza imwe yekudzokera kuFF zvakadaro, zvakashata nezve memory memory. Yakagadziriswa pfungwa, kukurumidza, kwete kunonoka restart kuchagadzirisa izvo.